smell – Healthy Life Journal
———၊ ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— သင်စိတ်ညစ်နေပါသလား . . မလန်းမဆန်းဖြစ်နေပါသလား . . နွမ်းနယ်နေပါသလား . . . သင့်နှာခေါင်းထဲကို အောက်ပါရနံ့တွေ တိုးဝင်လာတဲ့အခါ သင်ဟာ ပျော်ရွှင်မှုသုခကို ရရှိသွားမှာပါလို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုထားပါတယ်။...
တချို့တွေလေလည်ရင် ဘာကြောင့် ပိုနံရတာလဲ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူတိုင်းဟာ တစ်နေ့မှာ ၁၀ ကြိမ်နဲ့ အကြိမ် ၂၀ကြားလေလည်ကြပါတယ်။ လေလည်တယ်ဆိုတာ အစာခြေလမ်းကြောင်းစနစ် ကျန်းမာတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပါ။ တစ်ခါတလေ လေလည်သံကကျယ်ပြီး တစ်ခါတစ်ရံ တိုးပါတယ်။ တချို့က အနံ့မနံပေမယ့် တချို့လေလည်နံ့က နံပါတယ်။...
လူကြားထဲသွားတိုင်း ချွေးနံ့ကြောင့် စိတ်အနှောင့်အယှက် မဖြစ်စေဖို့ . . .
၊ လရိပ်မေ ၊ ချွေးထွက်တဲ့ဂလင်းတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကြောင့် ချွေးထွက်များသူတွေအနေနဲ့ ကိုယ်နံ့နံတတ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အနံ့က အလွန်ဆိုးနေရင် အနံ့နံတာကြောင့် လူမှုဆက်ဆံရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ချွေးထွက်များတာက စိတ်မသက်မသာဖြစ်စရာကောင်းသလို ချွေးထွက်များတာကြောင့် အရေပြားပေါ်က ဘက်တီးရီးယားနဲ့ထိတွေ့ပြီး အနံ့ဆိုးထွက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ်နံ့သင်းပျံ့နေစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။...
မေး. အသက် ၆၀ ပါ။ မိန်းမကိုယ်မှာ ဆိုးတဲ့အနံ့မဟုတ်ပေမယ့် အနံ့ရှိပါတယ်။ အဖြူအဖတ်လည်း နည်းနည်းနေပါတယ်။ ခါးနာခြင်း၊ ခါးကိုက်ခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်း ဘာတစ်ခုမှ မရှိပါဘူး။ အဖြူဖတ်တော့ အနည်းငယ်ရှိခြင်းကို ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ညွှန်ကြားပေးပါရှင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Anty Marie (FB)...
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) – ရှူးဖိနပ်ကို စိုနေချိန်မှာ ဒီအတိုင်း မထားပါနဲ့။ – ရှူးဖိနပ်ထဲကို ဆော်ဒါမှုန့်ထည့်ပြီး တစ်ညလောက်ထားလိုက်ရင် အနံ့ဆိုးတွေကို စုပ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ – ရှူးဖိနပ်ထဲက အောက်ခံပြား (Insole) ကို အသစ်လဲလှယ်ပေးပါ။ –...
ကြက်သွန်ဖြူစားပြီး အနံ့ပျောက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သင့်သလဲ
၊ ငွေကြယ်စင်ယံ ၊ ကြက်သွန်ဖြူစားရင် ကင်ဆာကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်တယ်၊ သွေးတွင်းမကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောအဆင့်ကို လျော့ကျစေတယ်၊ သွေးတိုးကိုထိန်းပေးတယ် . . ဒီလိုကောင်းကျိုးတွေ ရှိမှန်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ ကြက်သွန်ဖြူစားပြီး ခံတွင်းနံ့ထွက်ရင် လူတိုင်းစိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ရတဲ့အတွက် ခံတွင်းနံ့ကင်းစေမယ့် အောက်ပါနည်းလမ်းတွေထဲက တစ်ခုကို လိုက်နာကြည့်သင့်ပါတယ်။...